Maxay u Isticmaalaan Google Calaamadaha Sida Shabakadda Wareegga ee aasaasiga ah? - jawaab celceliska
Google Docs ama Google Waraaqaha waa software ku saleysan web. Barnaamijyadani waxay ku habboon yihiin qaabab badan oo Microsoft Office ah waxayna caawiyaan inay si fudud u xoqaan bogga internetka ee kala duwan. Waxaad isticmaali kartaa waraaqaha Google si aad u abuurto oo u saxdo faylasha shabakada oo aad hesho xogta waqtiga dhabta ah. Google Caymiska iyo Google Docs waxay ku heleen amaan ballaaran oo ku saabsan fududdooda, cusbooneysiinta wax soo saarka iyo natiijooyin la isku halleyn karo. Haddii aad raadineysid inaad dhisto waraaqaha Google ee waraaqaha Google , waxaad u baahan tahay inaad raacdo dhowr tallaabo oo fudud.
Tallaabada ugu horreysa waa in la nuqulo URL ee faafinta.
Talaabada labaad, waxaad u socotaa bogga, ku dhaji qoraalka qoraalka iyo midig-guji si aad u soo qaadatid menu.
Saddexaad, waxaad riixi doontaa xulashada Element Choice. Waxay muujinaysaa daaqada kormeerka isla markiiba halkaas oo aad kormeeri karto qaybaha HTML.
Tallaabada xigta waa in lagu daro xeer gaar ah ee daaqada horumarinta. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa shaqooyinka soo dejinta-XML-ka ee Google Waraaqaha si aad u hesho shaqadaada.
Faa'iidooyinka waaweyn ee Google Calaamadaha:
1. Maababka Gaaban
Waxaa jira khariidado gaaban oo kala duwan si loo yareeyo shaqadaada. Iyada oo waraaqaha Google, waxaad si sahlan u xusuustaa xoogaa gaaban iyo inaad qabato hawlo kala duwan. Tusaale ahaan, Ctrl + C waxaa loo isticmaalaa in lagu daabaco qoraalka laga helo boggaga internetka, Ctrl + V waxaa loo isticmaalaa in lagu dhajiyo qoraalka dukumeenti cad.
2. Foomamka iyo baaritaanada
Waxaad si sahlan u abuuri kartaa foomamka internetka iyo sahan oo leh Google Xaashiyaha. Waa faa'iido u laheyd dadka websaydhka ah iyo kuwa xorta ah ee raba inay ra'yi ka helaan macaamiishooda.
3. Xawaaree oo keydiso nuxurka bogga
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee Google Canshuuraha waa in aad si fudud u dhejin karto bogga internetka. Waxay ku habboon tahay ganacsiyada iyo barnaamijyadeeda waxayna ka caawisaa inay ku kaydiyaan nuxurka webka qaab wax loo akhrisan karo oo loo qaabisan karo. Waxaad faylasha si toos ah ugu soo celin kartaa qalabkaaga adag si aad u isticmaasho.
Google Waraaqaha ayaa ku habboon dhammaan nidaamka hawlgalka iyo aaladaha kombuyuutarka iyo kuwa gacanta. Waxaad ku dari kartaa koontadaada Gmail oo aad soo dejisan karto oo keydso faylasha inta badan aad rabto. Waraaqaha Google waxay ku fiican yihiin kuwa suuq geynta ah waxayna ka caawiyaan iyaga inay sameeyaan dhowr hawlood.
5. Sii wadista edebta
Awoodda ay u leeyihiin inay la shaqeeyaan saaxiibada waa faa'iido muhiim ah ee Google Caawin. Waad la sheekeysan kartaa asxaabta markaad fiirinaysid dukumiintiyadaada websaydhka ama waxaad ku dhajin kartaa bogga shabakada. Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa macaamiishaada oo aad tusto. Taas awgeed, waa inaad ku dhejisaa fallaadha qeybta Isgaadhsiinta iyo inaad ku raaxeysatid wadahadal dhab ah.
6. Google Caawinta Ganacsiga Google
Waxaa jira tiro badan oo qalab ah oo ku jira Google Visualization API Gadget Gallery. Waxaad soo dejisan kartaa qalabka ugu badan ee suurtagalka ah iyo inaad fuliso hawlahaaga. Ma waxaad tahay bangi maalgeliye ama ganacsade? Lacagta Google ayaa kaa caawin doonta inaad qabato hawlaha kala duwan ee shabakada. Si fudud ayaad ula socon kartaa maal-gashiga hadda jira iyo dib u eegida xogta taariikhiga ah. Iyadoo Google Spreadsheets, waxaad arki kartaa oo furi kartaa feyl kasta oo ay ku jiraan. xls, doc,. odt,. xlsx, ppt, iyo kuwo kale Source .